अन्तरवार्ता Archives - Samyantra
भनिन्छ, जीवन संघर्ष हो । सुन्दरको नाम समाजसेवीका रूपमा सुन्दर अक्षरले लेखिनुमा उनको संघर्षले ठूलो भूमिका खेलेको छ । मोरङको साबिक राजघाट ७ अर्थात् हाल उर्लाबारी ९ का सुन्दर श्रेष्ठले आफ्नो निजी खर्चमा गाउँको विकास गरिरहेका छन् । सडक बत्ति जडान वा विद्यालयमा विविध सहयोग, सुन्दरको नाम सहयोगीका रूपमा जोडिएकै... पुरा पढ्नुहोस
राजनीति, गीत संगीत, चलचित्र निर्माण र समाजसेवामा सक्रिय बहुप्रतिभाशाली ब्यक्तित्वको नाम हो हस्त बहादुर लिवाङ (लिम्बू) । मोरङ जिल्लाको लेटाङ ७ स्थित एक गाउँको सामान्य परिवारमा जन्मेका लिम्बू अहिले कुनै गाउँ समाजमा मात्रै होईन, विभिन्न रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म परिचित छन् । एसएलसीसम्म मात्र पढेका उनले पढाइपछि बिवाह गरेर... पुरा पढ्नुहोस
तपाइले कोरियन भाषा केन्द्र सञ्चालन गर्नुभएको कति बर्ष भयो ? मैले सन् २०११ बाट कोरियन भाषा काक्षा सञ्चालन गरेको हो । म त्यतिबेल घरमा नै ट्युसनको रुपमा पढाउँथें । स्थापित भएर सञ्चालन गरेको भनेको सन् २०१६ देखि हो । यस भाषा केन्द्रबाट हालसम्म कति विद्यार्थी पास गराइ सक्नु भयो ? ठ्याक्कै त भन्न... पुरा पढ्नुहोस
साकार बन्दैछ तमोर गड्तिरमा मोटर गुडाउने हेमराजको सपना
बिकास कल्पनाले मात्रै पूरा हुन्छ । जसले विकास गर्ने कल्पना गर्दैन, उ राजनीतिज्ञ बन्न पनि सक्दैन । मात्र स्वार्थी बन्छ । हेमराज भण्डारी पनि स्वार्थी हुन् । यतिमात्र फरक छ, उनी जनताका कामका लागि स्वार्थी बने । र, त्यही स्वार्थ आज राष्ट्रिय महत्वको बनेको छ । प्रत्येक राजनीतिज्ञसँग सपना र... पुरा पढ्नुहोस
काँग्रेसलाई समयमै नचिन्दा बर्बाद भएँ ,— उमेश गिरी , काँग्रेसका पुर्व लडाकु
बिराटनगर महानगर १० निवासी ६५ बर्षिय उमेश गिरी ४ मंसिरमा अचानक अध्यक्ष केपी ओलीको हातबाट टीका लगाएर एमालेमा प्रबेश गरे । उनकै टोल शान्चि चौकमा बिहान भएको चुनावी आमसभामा उनले ओलीको हातबाट टीका ग्रहण गरेर आफुलाई एमाले कार्यकर्ता बनाएका थिए । कुनै बेला काँग्रेसका लडाकु मानिने गिरीले लामो समय काँग्रेसमा... पुरा पढ्नुहोस
4 बर्ष,4महिना अगाडि
७ भाद्र २०७१, शनिबार
गैर आवासीय नेपाली संघ यूएईका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भुसालसंग एनआरएनए आइसीसी मिडिया टास्कफोर्स सदस्य उत्तम अधिकारीद्वारा लीइएको अन्तरवार्ता : यूएईमा एनआरएनएको मुभमेन्ट कस्तो छ, यहाँ रहेका नेपालीहरुको निश्वास कत्तिको आर्जन गरेको छ एनआरएनए यूएईले ? धेरै कुरा गर्न चाहदा चाहदै र महसुस हुँदा पनि गर्न सकिएको छैन । तर एनसिसि... पुरा पढ्नुहोस